Tesla အပါအဝင် လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်သူများမှာ ယင်းတို့၏ ကားကို ဝယ်ယူမောင်းနှင် နေကြသည့် ပိုင်ရှင်များထံကနေ အချက်အလက်များကို တရုတ်အစိုးရထံ ပေးပို့နေရသည်ဟု AP သတင်းဌာန၏ ရေးသား ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, GM, Nissan၊ Mitsubishi နှင့် Nio ကဲ့သို့သော ကားအမှတ်တံဆိပ်များက ယခုမော်တော်ယာဉ်ရောက်ရှိနေသော နေရာအပါအဝင် အခြားသော အချက်အလက် များကိုလည်း တရုတ်အစိုးရသို့ အသိပေးသည်ဟု သိရပါသည်။
အချက်အလက်များကို အစိုးရအထောက်အပံ့ပေးထားသည့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသော လုပ်ငန်းဗဟိုဌာနများသို့ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းသူများက သူတို့၏ လုပ်ရှားမှု များနှင့် အခြားသောသတင်းအချက်အလက်များ ခြေရာခံလိုက်နေခြင်းကို သတိမမူဘဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပေါ်လာလျက်ရှိသည်။
လျှပ်စစ်ကားများကို ခြေရာခံလိုက်နေခြင်းသည် တရုတ်အစိုးရ၏ ကြီးထွားလာလျက်ရှိသော လူမှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအမယ်စုံထဲသို့ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာသည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း AP သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရှိသည့် လျှစ်စစ်ကားများသည် မော်တော်ယာဉ်၏ အာရုံခံစနစ်များကတဆင့် မိမိတို့ ကားအမှတ် တံဆိပ်အသီးသီးထံသို့ အချက်အလက်များ ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိ နေပါသည်။ ကား တည်နေရာ၊ ဘက်ထရီအကြောင်း အသေးစိတ်နှင့် အင်ဂျင်အမျိုးအစားတို့ အပါအဝင် အချက်အလက် ၆၁ ချက်ကို ကားထုတ်လုပ်သူများက နီးစပ်ရာ စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းရေးဗဟိုဌာနသို့ ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။
ကားထုတ်လုပ်သူများအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ အဆိုပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသော အသုံးပြုမှုအတွက် အချက်အလက်များ ပေးပို့ရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များထံကနေ ကားတည်ရှိရာနေရာကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ မှတ်တမ်းတင်နေရသော အလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည့် အခြားသော အဓိက ကားဈေး ကွက်များဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျပန်နှင့် ဥရောပတို့နှင့် လွန်စွာကွဲပြားခြားနားနေလျက်ရှိပါသည်။
ခေတ်သစ်ကားများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကားတွင်ပါဝင်သော စနစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်များစုဆောင်ခြင်းနှင့် ကားမောင်းသူ၏ အလေ့အထကို ပိုမိုနားလည်ရန် သတင်းအချက်အလက် များစုဆောင်းပြီး အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသို့ ပေးပို့ပါသည်။ သို့သော် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အထူးစိုးရိမ်မှုများ ရှိသောအခါမှသာ အစိုးရထံ အချက်အလက်များကို ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဝါဒဖြန့်ချီခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းကနေ အင်တာနက်ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းအထိ ဆိုက်ဘာဘက်ပေါင်းစုံကို ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်နေသည့် အစိုးရဌာနနှင့် အခြားသော ကော်မတီများ၏ အထက်တွင်ရှိသည့် အထူးဆိုက်ဘာဌာနကို ဦးဆောင်နေသေသမ္မတ ဇီကျင်းပင်၏ ယနေ့ တရုတ်ပြည်လက်ရှိ အခြေအနေပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဇီကျင်းပင်သည် ၂ဝ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ဗဟို ဝါဒဖြန့်ချီရေးဌာန (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်အဆင့် အင်တာနက် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရုံးအဖွဲ့အထက်တွင်ရှိသော ဆိုင်ဘာရေးရာ ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မရှင်ကို အသစ် ဖွဲ့စည်းပြီး သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆိုက်ဘာအနာဂတ်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားဖြင့် အလုံးစုံထိန်းချုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။
ဧပရယ်လတွင် ဘေဂျင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဆိုက်ဘာကွန်ဖရင့်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အံအားသင့်စရာကို ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ ယင်းမှာ သူရဲ့ တရုတ်ကြန်အင်လကဏာ ဆိုက်ဘာအုပ်ချုပ်မှု အနာဂတ်အမြင်မှာ အဘယ်သို့ နည်းဆိုတာကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
"တရုတ်နိုင်ငံဟာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့ သတင်းအချက်အလက် ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် သမိုင်းဝင် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများ ရရှိခဲ့ပြီး တရုတ်ကြန်အင်လက္ခဏာ ဆိုက်ဘာအုပ်ချုပ်မှု မော်ဒယ်ကို ပုံဖော်ခဲ့ကာ နိုင်ငံ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မဟာဗျူဟာမြောက်သော စဉ်းစားချက်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့ပါတယ်" ဟု ဇီကျင်းပင်၏ ပြောဆိုချက်ကို တရုတ်အစိုးရပိုင် ဇင်ဟွာ သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါသည်။
ဇီကျင်းပင်သည် "ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် သတင်းအချက်များ" ဖြင့် စစ်ဘက်-အရပ်ဖက်ပေါင်းစည်းမှုကို မြှင့်. တင်ရန် အလေးထားဆောင်ရွက်နေပြီး ယင်းကို"မရှိမဖြစ် အရေးကြီးဆုံးနှင့် အ လားအလာအရှိဆုံး အဓိကနယ်ပယ်များတွင် ပေါင်းစပ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်" ဟုသုံးနှုန်းခဲ့ကြောင်း တရုတ်နေ့စဉ် သတင်းဌာနက ဧပရယ်လတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မည်သို့ပင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဆို ဇီးကျင်းပင်သည် သူ၏ ဆိုက်ဘာရေးရာဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မရှင်ကနေ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများကို တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ကာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ အရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်မှုကို စစ်ဘက်မှ ချဉ်းကပ်သည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမှာ သိသာလွန်းပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနည်းပညာကို တည်ဆောက်နေပြီး အသုံးလည်းပြုနေပါသည်။အင်တာနက်လုပ်ငန်းကြီးများသည် သူတို့၏ ဖောက်သည်များကို စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်။ နိုင်ငံသားများ၏ ရေးသားသော စာများကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည့် apps များကို အတင်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲခိုင်းပါသည်။ အလီဘာဘာကဲ့ သို့သော် တရုတ်နည်းပညာလုပ်ငန်းများထံကနေ အချက်အလက်များကို တောင်းပါသည်။ ရဲများသည်လည်း လမ်းများနှင့် ဘူတာရုံများကဲ့သို့ လူစည်ကားသော နေရာများတွင် လူတွေကို ခွဲခြားရှာဖွေနိုင်သည့် အထူးမျက် မှန်များ တင်ဆင်ထားပါသည်။
ဇီကျင်းပင်သည် နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် လှုပ်ရှားမှု၊ အကောင်း၊ အဆိုးတို့ကို ဆန်းစစ်သည့်လူမှုအမှတ်ပေးစနစ်ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းဖြင့် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်စတင်ကာ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် ပထမဦးဆုံး ဒစ်ဂျစ်. တယ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ထူထောင်လျက်ရှိနေပြီး ဗဟိုကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ မျက်စိအောက်တွင် သင်ဟာ မည်သူဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသည့် အရောင်အမှတ်အသားအခြေခံ လူမှုအဆင့်နှင့်အတူ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ များစွာလှသော အကန့်အသတ်မဲ့ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းလျက်ရှိနေသည်ဟု လေ့လာသူများက ဆိုသည်။
"လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများကို သင်လေ့လာရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သင်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခံရပြီး သင့်လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဘဝအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်" ဟု ယခင် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဘု(ရှ်) အောက်တွင် အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး လုပ်ခဲ့ဖူးသည့် မီးရှယ် ချားတော့(ဖ)ကို AP သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်အရာရှိများက လျှစ်စစ်ကားနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူ့လုံခြုံရေး မြှင့်တင် ရန်၊ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦး စီမံကိန်းတို့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် အထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ်များတွင် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများ မရှိစေရန် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟု AP သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မနှစ်က လျှစ်စစ်ကားကဲ့သို့ အခြားစွမ်းအင်သုံးကားများ (လောင်စာဆီသုံးမဟုတ်ပါ) ရောင်းချရမှုမှာ ကားရောင်းချရမှုအားလုံး၏ ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် စွမ်းအင်အသစ်သုံး ကားများ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနိုင်ရေးမှာ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဦးစားပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိသာရှင်းလင်းလှပါသည်။
Bloomberg China မီဒီယာ အဆိုအရ တရုတ်နိုင်ငံသည် လျှပ်စစ်ကားများ အသုံးပြုနိုင်ရေးဖက်သို့ ဦးတည် ရွေ့လျားလျက်ရှိနေသည်။
စက္ကန့်တိုင်းမှာ ရောင်းချရနေသော လျှပ်စစ်ကားများသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားနေပြီး ၂ဝ၂၅ တွင် လျှပ်စစ်ကား အသုံးပြုမှုမှာ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိမည်ဟု Bloomberg China မီဒီယာက ခန့်မှန်းသည်။ တရုတ်အစိုးရမှလည်း ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိလာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။
၂ဝ၁၈ မေတွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင်း လျှစ်စစ်ကားရောင်းချရမှုမှာ ၉၅ဝဝဝ ခွဲရှိပြီး မနှစ်ကထက် ၁၂၈ ရာခိုင်နှုန်းပို များခဲ့သည်။
နောက်နှစ်ကစပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရှိသော ကားထုတ်လုပ်သူများအားလုံးသည် စွမ်းအင်သစ်ကားများအတွက် အနည်းဆုံး ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကို ပြည့်မှီရန် ဆောင်ရွက်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် နိုင်ငံခြားစွမ်းအင် အရင်းအမြစ်များအပေါ် မှီခိုမှုကို လျော့ချရန်ဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်သစ်လုပ်ငန်းစုနယ်ပယ်တွင် ရှေ့တန်းရောက်လာစေရန်အတွက် တရုတ်အစိုးရ၏ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှု၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်မျိုးဆက်ကားများထံကနေ အချက်အလက်များအပေါ် သတ်မှတ်ထားသော အစိုးရ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ကြိုတင်စိုးရိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး ၂ဝ၂၅ တွင် တရုတ်နိုင်ငံက သူတို့၏ လျှပ်စစ်ကားအသုံးပြုမှု အရေအတွက် သတ်မှတ်ချက်ကို ပြည့်မှီပါက အစိုးရသည် ယင်းကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသော စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုရေး လုပ်ငန်းဗဟိုဌာနကနေ ထွက်စရာမလိုဘဲ သစ်လွင်ပြီး များပြားလွန်းသည့် အချက်အလက်များစွာကို စုဆောင်းရရှိ လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
(ယခုသတင်းဆောင်းပါး Business Insider တွင် ဖော်ပြထားသော Electric-car owners in China are worried their vehicles are sending their locations to the government ကို ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး CarsDB ၏ အာဘော်မဟုတ်ပါ။)